Travel & Tours Staff | Lucky Child Co., Ltd. ﻿
Travel & Tours Staff
28.8.2019, Full time , Service
•	အသက်(၂၀) မှ (၃၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမည်။
•	English-4 Skill ကျွမ်းကျင်ပြီး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ခန့် ရှိရပါမည်။
•	Online, Ticket, Airline, Visa & Internet ပိုင်းများကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ၊ ကုမ္ပဏီနှင့်ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location No.(110) , U Chit Maung Street , Bahan Township,Yangon.
152 Days, Full time , Service
•	ရိုးသား၍အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး၊ကုမ္ပဏီနှင့်ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးTeam Workရှိရပါမည်။ •	Mediaလုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရပါမည်။
•	Opening Balance, Balance Sheet, Trial Balance, Profit & Loss, Stock,.etc.စသည့်များကိုဆွဲနိုင်ရမည်။
•	ရိုးသားပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	Customer Service ကောင်းမွန်၍ စကားပြော ချိုသာရမည်။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	ရိုးသား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ လူအများနှင့်စကားပြောဆို ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
332 Days, Full time , Service
•	လူမှူဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်းသူဖြစ်ရမည်။
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး၊ကုမ္ပဏီနှင့်ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်းသူဖြစ်ရမည်။
•	ရိုးသား၍အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရိုးသား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Computer (Word , Excel , Internet Email) ကျွမ်းကျင်ရပါမည်။ •	ရိုးသား၍အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Travel & Tours Staff Hospitality & Tourism jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Lucky Child Co., Ltd. Hospitality & Tourism jobs Hospitality & Tourism jobs Service Jobs in Myanmar, jobs in Yangon